Tababaraha xulka Argentina oo MARMARSIYO u sameeyay guuldaradii ay kala kulmeen xulka Colombia – Gool FM
(Ameerika) 16 Juunyo 2019.Tababaraha xulka Argentina ee Lionel Scaloni ayaa dhaleeceeyay garoonka Arena Fonte Nova, oo marti galiyay kulankii ay la ciyaareen Colombia, isagoo sheegay inay ceyb tahay in sidaas uu u xumaado.
Xulka qaranka Argentina ayaa kala kulmay dhigiisa Colombia, guuldaro 2-0 ah, kulankooda ugu horeeyay ee tartanka Copa America.
Argentina ayaa soo bandhigtay qaab ciyaareed aad u xun, halka xulka qaranka Colombia uu u qalmay inuu guul gaaro, waxayna guuldaradan sii kordhisay cadaadiska saaran Lionel Messi.
Hadaba macalinka xulka Argentina ee Lionel Scaloni ayaa shir jaraa’id uu kasoo muuqday ciyaarta kaddib wuxuu sheegay:
“Waxaan u maleynayaa inay ahayd wax ceeb ah in xaalka garoonka uu sidaan noqdo, marka loo fiiriyo in kani uu ahaa kulankii ugu horeeyay ee halkan”.
“Ma doonayo inaan ogaado sida uu noqon doono dhulka garoonkan kaddib laba kulan ama saddex kulan, laakiin waa inuu inbadan ka fiicnaadaa sidaan ku aragnay”.
“Marka aan ka hadlo ciyaarta, Colombia waa xul aad u fiican, arinta ugu muhimsan ayaana ah inaan u maleyno in si fiican aan ula ciyaarnay, waxay ahaayeen wakhtiyada qaar kuwo fiican, anagana sidoo kale”.
“Waxaan ahayn kuwo fiican, gaar ahaan qeybtii labaad ee ciyaarta, xitaa marka uu naga dhashay goolka horeeyay ee ahaa mid counter-attack ah”.